Carlo Ancelotti oo ammaanay xirfada Cristiano Ronaldo kaddib markii ay Juventus ku guuleysatay horyaalka Talyaaniga – Gool FM
Jürgen Klopp oo ka hadlay guuldarradii Liverpool ka soo gaartay kooxda Atalanta
Dajiye July 28, 2020
(Turin) 28 Luulyo 2020. Tababarihii hore kooxda Juventus ee Carlo Ancelotti ayaa ammaanay waxqabadka Cristiano Ronaldo ee xilli ciyaareedkan, taasoo ka caawisay Bianconeri inay ku guuleysato horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga markii 9-aad oo xiriir ah.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay macalinka haatan leyliya kooxda Everton ee Carlo Ancelotti, wuxuuna yiri:
“Kani wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii caadiga ahaa ee looga bartay Cristiano Ronaldo, wuxuuna sidaan oo kale noqon doonaa xilli ciyaareedka soo socda”.
“Waa ciyaaryahan ay cajiib tahay xirfadiisa, taasoo u ogolaaneysa inuu ku sii jiro heerkiisa ugu sarreeya”.
Si kastaba ha noqotee, Juventus ayaa ku guuleysatay horyaalka Talyaaniga xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay kooxda Sampdoria kaga adkaatay 2-0 kulankoodii la soo dhaafay, iyadoo goolasha Juve ay u kala dhaliyeen Ronaldo iyo Bernardeschi.
Xavi Hernandez oo tilmaamay xilliga uu rajeynayo inuu noqondo tababaraha kooxda Barcelona